Archives yeJanuary 2021
Motorola Edge S 5G vs OnePlus 9: Mireza inotevera inotsanangurwa
Lenovo-yakatsigirwa Motorola ine muurayi mureza mumusika weChina uye inogona kunge iri mutsva wepasirese munguva pfupi. OnePlus, iyo yakatanga semhondi inouraya, yakatemwa zvakare kuendesa yakakwira-kumagumo smartphone kupa vanofarira veSamsung Galaxy S21 kumhanyisa mari yavo. Mireza iri kuuya - vari voga - Motorola Edge S 5G uye OnePlus 9 vanogona kutanga pasi rose mu… [Verenga zvakawanda ...] nezve Motorola Edge S 5G vs OnePlus 9: Inouya mureza wakatsanangurwa
Acer Chromebook Spin 514 (2021, AMD) yekutanga ongororo: Kusiyanisa kunaka kwayo
Kwakave nemazuva apo Chromebook aive e-ultra-bhajeti malaptop asina zvisingaonekwe skrini. Chokwadi, isu takaona akanakisa-epamusoro-magumo mamodheru, futi, asi kana zvasvika pakuyera Acer yakawana zvese kutarisa neiyo Chromebook Spin 514. Iyi 2021 modhi, yechipiri-gen zororo re2018 yekutanga, inokwidza iyo maficha nekusuma AMD Ryzen kekutanga kuChbookbook,… [Verenga zvakawanda ...] nezve Acer Chromebook Spin 514 (2021, AMD) yekutanga ongororo: Kusiyanisa kunaka kwayo
Oppo Reno 4 Z ongororo: Inodhura 5G
Munguva yese ye2020 iyo kurwira kwekutonga pakati-renji smartphone musika yakapisa zvinotyisa. Neboka rimwe chete remakambani kunyanya kuratidza zvaive zvakanyanya kuda kuwedzera makwikwi kumusika wanga wakura zvishoma mukumira kwevagadziri vachidzingirira iwo mabhureki emitengo mina. Iri boka, chokwadika, ndiro BKK. Kune avo vasingazive, ndiyo mhuri iyo… [Verenga zvakawanda ...] nezve Oppo Reno 4 Z ongororo: Inodhura 5G
Samsung Galaxy SmartTag ongororo: Kurasika mumunda weSamsung wakakomberedzwa
Samsung's Smart SmartTag ndeye Bluetooth tracker, inotarisa kuwedzera kusvika kwe SmartThings Tsvaga kupfuura izvo zvishandiso zvine hukama hwavo, kunge foni kana piritsi. Inotevera zvakanyanya muforoma weTile, iyo kambani yakanyatsogadzira uye yakatonga musika weBluetooth tracker kusvika pano. Ndozvinoitawo Galaxy SmartTag, kana ichi tracker… [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy SmartTag ongororo: Kurasika mumunda weSamsung wakakomberedzwa
Acer Predator Triton 300 SE yekutanga ongororo: Iyo yemazuva ese gamers 'laptop
Acer emitambo malaptop anotenderera akasiyana siyana, saka kunyangwe iwe uchitsvaga chimwe chinhu chinoshamisira kana chimwe chinhu chakanyatso chenjera, pane zvakawanda zvekusarudza. Kana iwe uri mune yekupedzisira musasa saka izvi, iyo Predator Triton 300 SE, inogona imba mirwi yekukwirira. Iyo 'SE' - inomirira dhizaini dhizaini - ndiyo yekutanga 14-inch Predator laptop iyo Acer yakamboita, ichiisa… [Verenga zvakawanda ...] nezve Acer Predator Triton 300 SE yekutanga ongororo: Iyo yemazuva ese gamers 'laptop
Enda kune peji 82